Nhasi Trading Trading Positions | FXCC
musha / Trading / Forex Tools / Nhasi Trading Trading Positions
Yako Yepanguva Yokutengeserana Nzvimbo Dzimba
Nhasi Trading Trading Position (CTP) inopa ruzivo pamusoro pemari gumi nematanhatu emari yechipiri uye yegoridhe. Zvigadzirwa zvekutengesa zvakabatanidzwa nekutenga / kutengesa kutengesa zvakakonzerwa kuitira kuti zviwane masumbu emakisi. Mashoko aya anongororwa kakawanda munguva dzekutengeserana zvidzidzo nematunhu matsva akaonekwa. Nzvimbo dzinochengetedzwa kamwe chete mumaminitsi e15 uye dzinobviswa kubva pane zvigadziriswa pazvinotengeswa nemisika.
CTP se Independent Tool
Ne widget iyi vatengi vedu vanogona kutora ruzivo rwemashoko anoshanda; vatengi vane ruzivo rwechinzvimbo chekugadzirisa izvo zvinoratidzira mazinga emitengo, zvakadai se, muvhareji kutenga uye yepamusoro kutengesa mutengo. Iyo data yakarurama; iyo inounganidzwa uye inosunungurwa nechokusava nechegi nemabhuku ekutengeserana mazano.
CTP sechikamu che Kusanganiswa
Iyi widget inogona kuratidza kuti inoshandiswa chaizvo iyo inosanganiswa nekutsigirwa nekutsoropodza kushandiswa. Izvo zvinonzi zvigaro uye kutenga / kutengesa kutengesa kunotorwa kubva kutungamiri vevatengesi vepanhau vane vateereri vakawanda vanoita kune aya mazinga, vachiita mutengo wematengo kunyange kunyanya kuvimbika.
Ichi chishandiso inopinda kuburikidza neVatengi vedu Hub yeFXCC account holders.
Login kuti uwane yedu DZIMHURI dzokutengesa zvombo
Kuti uise zvishandiso zvezvishandiso zvako zvepachena, tangotanga kupinda kune Vatengesi Hub verenga
Terms & Conditions uye ita chikumbiro chako.